Endriky Ny Fitateram-Bahoaka Azia Atsimo-Atsinanana An-tsaripika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2014 0:49 GMT
Vakio amin'ny teny polski, বাংলা, čeština , Español, македонски, Français, русский, 日本語, Ελληνικά, English
Na dia eo aza ny lalàna thailandey mitaky ny tsy maintsy hisatrohana aroloha amin'ny fianjerana, dia hita ho manitsakitsaka ny lalàna na ny mpanamory na ny mpandeha. Saripikan'i Matthew Richards, Fizakàmanana @Demotix (10/6/2012)
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity ny Global Voices nanasongadina saripika iray malaza vetivety nampiseho Vietnamiana vehivavy iray manamory scooter tsy mitondra aroloha sady mitondra zaza. Iray amin'ireo fanehoan-kevitra amin'ilay saripika no nilaza fa mampiseho ny zavamisy marina any amin'ny araben'i Vietnam izy iny. Indrindra, mahazatra ny mahita mpitondra môtô tsy mitondra aroloha tsy ao Hanoi ihany, fa any amin'ny tanàna Vietnamiana hafa.
Saingy tsy voafetra ao Vietnam ihany ny tranga tahaka izany. Raha mandehandeha any amin'ny tanàna hafa any Azia Atsimo-Atsinanana isika, dia afa-mahita ohatra maro fanitsakitsahana ny arolozan'ny fifamoivoizana mitovitovy amin'izany koa.
Ny sary etsy ambony amin'ity lahatsoratra ity dia mampiseho mpitondra môtô iray hafa tsy mitondra aroloha, fa tany Thailandy kosa tamin'ity indray mitoraka ity.
Ilaina ny lalàna fametrahana fifamoivoizana hentitra ho fiarovana ny vahoaka. Fa matetika isika no mahita olona, anisan'izany ny ankizy, mitaingina fiara izay mety hampidi-doza tokoa ny fiainany. Izy ireo no fampahatsiarovana mivaingana amin'ny tsy fetezana sy tsy fahombiazan'ny rafi-pitaterana any amin'ny firenena Aziatika Atsimo-atsinanana maro. Jereo ny sary eto ambany:
Thailandey mpianatra azo sary raha nentina nody eo an-tafon'ny fiarabe feno olona. Saripikan'i Matthew Richards, Fizakàmanana @Demotix (7/18/2013)
Mety ho manahirana tokoa ny mandeha dia lavidavitra any Kambodza, indrindra any avaratra atsinanana:
Saripika avy amin'i @billherod
Mety mahazo olona be loatra ny fiaran-dalambin'i Indonezia amin'ny fotoana mahabe mpandeha:
Mpandeha fiaran-dalamby ao Jakarta mipetraka amin'ny tafon'ny kalesy, anilan'ny varavarankely sy anelanelan'ny kalesy. Saripikan'i wisnu agung prasetyo, Fizakàmanana @Demotix, (29/2/2010)
Mitondra olona sy entana ny Jeepneys any Filipina, eny fa na dia mavesabe aza ry zareo matetika:
Tahaka izao ny Jeepney aty amin'ny faritany …
Any Myanmar, ny mpanoratra Jason Szep namakafaka ny rafi-pitateraka lany andro ao amin'ny firenena:
Fiara maro dia maro, ohatra, fiara entina ankavanana, izay fiverenan-dalana mankany amin'ny fanjanahantany Britanika. Na izany aza ny lalana dia fifamoivoizana entina ankavanana, mitovy amin'ny rafitra Amerikana, mampihena ny fijerena sy mahatonga ny mpamily ho mailo mandrakariva.
Koa satria ny firenena Aziatika atsimo-atsinanana miomana amin'ny fampidirana ny toekarenan-dry zareo amin'ny 2015, dia tsy maintsy mandinika ihany koa ny tolotra ara-pitaterana ry zareo hanosehana ny fitomboana, famokarana anatiny, ary zava-dehibe indrindra, miaro ny filaminan'ny olom-pireneny.